उत्तम मोबाइल अनुप्रयोग डिजाइन गर्दै Martech Zone
बिहीवार, जनवरी 3, 2013 बिहीवार, जनवरी 3, 2013 Douglas Karr
हाम्रो अर्कोमा रेडियो शो हामी छलफल हुनेछौं स्टारबक्स मोबाइल अनुप्रयोग जुन बितेको २०१२ मोबाइल मार्केटर अफ द इयर अवार्ड। मेरो विचारमा, यो वास्तवमै एक उत्तम मोबाइल अनुप्रयोग हो जसले अनलाइन र भण्डार खरीदको बिच मार्केटिंग खाली गर्छ।
सुविधाहरू जसले अनुप्रयोगलाई सफल बनाउँदछ
प्रयोज्य - एप्लिकेसनको तल एक प्राथमिक नेभिगेसन बार छ साथै होम स्क्रिनले स्पष्टसँग प्रयोगकर्ताको गतिविधिमा आधारित अनुप्रयोगको सेक्सनहरू प्रदर्शन गर्दछ। अनुप्रयोगसँग एकदम थोरै गडबडीको साथ स्पष्ट स्क्रीनहरू छन् - चालमा वा मोटा औंलाहरूका साथ कोहीका लागि उत्तम।
भुक्तानी प्रसोधन - अनुप्रयोग आईओएस पासपोर्ट अनुप्रयोगको साथ एकीकृत गर्दछ र भुक्तानको लागि प्रयोग गर्न यो सरल बनाउँदछ। म क्रेडिट खाता वा पेपैल मार्फत सिधै केही मिनेटमा अनुप्रयोगमा भरपर्दछु। एप्लिकेसनले मेरो हालको रिवार्ड कार्डको उपयोग गर्‍यो त्यसैले यो महान थियो कि यो म्यानुअल कार्ड प्रक्रियासँग पछाडि मिल्दो थियो।
पुरस्कार - पुश सूचनाहरूको साथ एकीकृत आईट्यून्स पुरस्कार एक हावा हो। जब म पर्याप्त कफिहरू खरीद गर्छु, मँ एक गीत प्रस्ताव गर्दछु कि म यसमा क्लिक गरेर तुरून्त डाउनलोड गर्न सक्छु। थप रूपमा, यसमा ताराहरूसँग कप हिलाउने क्षमता एक राम्रो स्पर्श थियो!
स्टोर लोकेटर - फ्लोरिडाको भर्खरको ड्राइभमा, मैले एप्पल र गुगल नक्शाको साथ नजिकको स्टारबक्स प्रदान गर्ने समस्याहरू गरिरहेको थिएँ। चिन्ता नगरिकन, स्टारबक्स अनुप्रयोग भू-सक्षम छ र म सँधै नजीकको स्टारबक्स यात्रामा भेट्टाउन सक्षम थिएँ।
उपहार - म ईमेलबाट कसैलाई अनुप्रयोगबाट सिधा उपहार पठाउन सक्छु!
उत्पादन - चाहे यो पेय पदार्थ, coffees वा खाना हो, अनुप्रयोग स्टारबक्स मेनू मा तपाईंलाई आवश्यक सबै जानकारी प्रदान गर्दछ।
मनपर्ने - तपाईंसँग तपाईंको साथीको मनपर्ने पेयहरू बचत गर्ने क्षमता छ। त्यो स्टारबक्समा भेट्ने व्यावासायिकको रूपमा रमाईलो छ!
उत्तम मोबाइल अनुप्रयोग
जबकि यो अतिरिक्त स्टोर ट्राफिक ड्राइभ गर्न र कार्ड कोष स collecting्कलन गर्नका लागि अद्भुत अनुप्रयोग हो, मलाई लाग्छ त्यहाँ केहि सुविधाहरू छन् जुन अनुप्रयोगलाई थप अनलाइन र भण्डार खरीदहरू ड्राइभ गर्न मद्दत गर्दछ:
चेक इन - यदि मैले मेरो नजिकको स्टारबक्स देख्न सक्दछु र मेरा साथीहरूले भित्र भित्र पस्छन् भने पनि यो अचम्मको हुनेछ। एक फोरस्क्वायर चेक-इन एकीकरण वास्तवमै सहयोगी हुनेछ। एक सप्ताहन्तमा, म केवल स्टारबक्स स्टोरहरूको गिर्खाई मन पराउँछु र साथीमा घुलमिल भएको एउटामा जान चाहन्छु।
सामाजिक - अचम्मको कुरा, मोबाइल अनुप्रयोगको फेसबुक, ट्विटर, Google+, फोरस्क्वायर, आदिसँग कुनै सामाजिक एकीकरण छैन। यो विशेष गरी चेक-ईन र गिफ्टको लागि उपयोगी हुनेछ। सायद अनुप्रयोगबाट खरिदको सिधा सूचना हुन सक्छ मेरा साथीहरूलाई स्टारबक्समा म के हुँ भनेर बताउन!
Geofencing - किनकि अनुप्रयोगमा पहिले नै पुश सन्देशहरू छन्, यदि म स्टारबक्सको नजीक आउँदैछु भने मलाई किन प्रस्ताव राख्ने छैन?
आदेश - किनकि मसँग मेरो मनपर्ने पेय र मनपर्ने खाद्य वस्तुहरू पहिले नै एप्लिकेसनमा सेट अप गरिएको छ, के त्यहाँ स्टारबक्समा मलाई लाइन र अर्डरमा राख्नको लागि साँच्चिकै कारण छ? किन बिक्रीको बिन्दुमा स्टिकर प्रिन्ट नगर्नुहोस् जुन बरिस्टाले उठाउन र पूरा गर्न सक्दछ! तिनीहरूले भर्खर नाम बोलाउन सक्छन् र तपाईं आफ्नो पेय उठाउन सक्नुहुन्छ।
टैग: मोबाइल अनुप्रयोग डिजाइनस्टारबक्सस्टारबक्स मोबाइल अनुप्रयोग
जनवरी 10, 2013 मा 10: 29 एएम
म जियोफेन्सिंगको हिसाबले फ्यान हुँ - मँ चाहान्छु कि अधिक खुद्रा विक्रेताहरूले यसको प्रयोग गरून्।